(ပိုတယ်လို့ ဆိုချင်ဆို …)
ဒါရိုက်တာကျောင်ယီးမူရဲ့ The Road Home ထဲက
ကျန်ဇီယီနဲ့ တူတဲ့ ကျနော့်မေမေ။
ဗမာလူမျိုး ဖေဖေ့ကို ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့
“အမေ” လို့ မခေါ်
“မေမေ” လို့သာ ခေါ်တတ်တဲ့ ကျနော့်မေမေ။
“ငါ သေချင်တယ် … ငါ သေချင်တယ်” လို့
သူ မတက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဆေးကျောင်း
ဒီဖေဖေနဲ့ ဒီမေမေက မွေးတဲ့
ကျနော် လောဘကြီးမိတဲ့ ကျနော့်မေမေ။ ။
(၆၅ နှစ်ပြည့် မိခင်၏ မွေးနေ့သို့ …)
MYO HAN said...
this is the best i have read from your blog, ko ls. cheers!
ကဗျာလေးဖတ်ပီး ငြိမ်အေး၊ ဝမ်းသာ၊ ပီတိဖျာမိတာ အသေအချာပါပဲ
မိဘနဲ့ ကျေးဇူးရှင်များကို ချစ်တတ်ရမှန်း ကျေးဇူးရှင်မှန်သိတ်တတ်ရကောင်းမှန်သိသူတွေရဲ့ နှစ်လုံးသားနဲ့ ဦးနှောက်ထဲမှာ မှန်ကန်စွာတွေးခေါ်တတ် သို့မဟုတ် အနီးစပ်ဆုံ မှန်ကန်အောင်တွေခေါ်တတ်တဲ့ သဘာဝစွမ်းအင်ရှိနေတတ်တယ်တယ်၊ မတရားတာကို မတွန်လှန်နိုင်သည့်တိုင်အောင် ကိုယ့်တိုင်က အနည်းဆုံး မယုတ်ညံ့အောင် နဲ့ အညံ့ထဲက ရုံးထွက်နိုင်စွမ်းရှိသူတွေလို့ ယုံမိတယ်။ (ကိုယ်ပိုင် အတွေးတစ်ခုမျှသာပါ)
မေတ္တာတရားတွေ မျှဝေခံစားရင်း ပီတိ ဖြစ်မိပါတယ်..
i sympathize with u.u are younger thaan me,my mother was dead in 1956 at that time i was 11 mth only i had never seen my mother even photo because at that time so far from nearest city nobody knew how to get photo therefore ur lucky than me thanks u.
Mg Pauk Kyaing said...